top – Website Hosting raqiis ah
Sidaas waxaad rabtaa inaad bilowdo blog? Taasi waa cajiib! Blogging waa mid sahlan iyo madadaalo, laakiin ma fududa. Dhab ahaantii ma fududa. Inkasta oo aad samayn kartid blog-ka WordPress wax ka yar saacadaha 10, waxay qaadataa saacado badan oo ah diiradda iyo dulqaadka si ay wax u eegaan sida aad rabto. Hadafkeenu waa inaan kaa caawiyo inaad sameyso barta blogka ah ee xoqashada bogga ugu wanaagsan ee adduunka – blog.org.
Waa lacag la’aan haddii aad dooraneyso mawduuc WordPress ah oo bilaash ah.
Qalabyada muhiimka ah ee loo yaqaan ‘blogging’.
Riix badhanka “Add to Cart” si aad ugu darto (ama dhamaantiisaba) magacyada domain la heli karo si aad u iibsan kartid Namecheap shopping cart.
Riix batoonka “View Cart” si aad u habeysid ereyga diiwaangelinta domainka, ama inaad iibsato adeegyo dheeraad ah oo ku habboon, ama inaad codsato xeerka Promo.
Riix ‘Order Confirm’.
Dib u eeg magacaaga domain, mudada diiwaangelinta, faahfaahinta bixinta, iyo dabcan qiimaha kama dambaysta ah oo guji “Bixinta Hadda”.
Waxaad arki doontaa xaqiijinta amarka waxayna heli doontaa email Gaaban Foomka oo leh faahfaahinta amarkaaga. Dhanka kale, waxaad riixi kartaa badhanka “Maaree” si aad u gashid Dashboardkaaga Namecheap iyo maamulida magacaaga cusub ee diiwaangashan.
Mar labaad, riix badhanka “Maareynta” (ku xiga magaca domainka) si aad u cusbooneysiiso faahfaahinta xidhiidhada ama liiska, ama inaad iibsato adeegyo dheeraad ah oo dheeraad ah sida ilaalinta asturnaanta, email, iwm.
Dhibaatadu waa, webka martigeliyaha ah ee lagu soo jeediyo ‘Blogger A’ ayaa noqon karta shirkadda ugu xun ee marti gelisa ‘Blogger B’ ama kan kale. Mar labaad, boqolkiiba wacan ee bloggers ama “websaydhada ugu fiican martigelinta dib u eegista iyo qiyamka” ayaa la jaraa.
Marka laga hadlo, Wadaaga Guud ayaa ah kuwa ugu caansan – iyo sidoo kale qorshaha ugu fiican ee – web hosting. Waa super-fududahay in la maareeyo qorshaha martigelinta ee la wadaagayo, sidoo kale wuxuu u siman yahay bilawga iyo sidoo kale webmaster khibrad leh.
Sidoo kale, martigelinta la wadaago ayaa sidoo kale laga yaabaa inay ku haboon tahay markaad u baahan tahay inaad marto boggag badan – hadba inta aadan filaynin boqollaal kun oo booqasho saacadba bog kasta.
Tag Hawk Hoyga martigelinta oo guji “Hosting” si aad u dooratid qorshaha martigelinta ee la wadaago.
Isticmaal “Diiwaangelin cusub domain” doorashada, haddii aad rabto inaad iibsato magac domain via via Hawk Hoos laftiisa.
Haddii aad hore u soo iibsatay (waxaad ka sheegtaa Namecheap.com ama GoDaddy.com) ama u lahow meelo kale markaa isticmaal “Waxaan isticmaali doonaa domainka hadda jira oo cusbooneysiiya servero” doorasho.
Dib u eeg qorshahaaga barnaamijka martigelinta iyo wareegga xawilaadda, martigelinta meesha (iska indha tan haddii aadan ogeyn waxa uu yahay), dabcan qiimaha kama dambaysta ahna riix “Continue”.
Xaqiiji qiimaha kama dambaysta ah (kaddib markaad codsanayso code-daada) iyo guji “Checkout”.
Geli faahfaahintaada shakhsiga, biilasha iyo bixinta iyo guji “Amar Dhameystiran”.
Gelitaanka Aaga Macaamiisha Macaamiisha Hawk Macaamiisha adiga oo soo galaya cinwaankaaga emailkaaga iyo furaha aad ku qortey inta lagu guda jiro “Nidaamka” Qaadashada “.
Taasi waa Aagga Macaamilka Macaamiisha Macaamiisha ama Dashboard ka ah meesha aad maamusho alaabtaada Hawkarka martidaada iyo adeegyada iyo biilka. Waxaad ku dhejin kartaa “ADEEGYADA” si aad u aragto alaabtaada iyo adeegyadda Hawkarradaada.
Haddii aad isla markiiba qorto ka dib marka aad saxiixdo, waxaad arki doontaa xaalada “kuxidhan” ee koontada martigelinta. Si kastaba ha ahaatee, waad guji kartaa si aad u aragto macluumaadka martigelinta (sida magaca domain la xiriira, magaca server, cinwaanka IP, servero, iyo faahfaahinta biilka).
Waxaad arki doontaa liistada dhamaan magacyada domainka ee ka diiwaan gashan Namecheap. Riix badhanka “Maaree” (oo ku xiga magaca domainka) si aad u cusbooneysiiso faahfaahinta xiriirka ama cinwaanada, ama inaad iibsato adeegyada dheeraadka ah ee ku-saabsan sida ilaalinta asturnaanta, iimayl, iwm.
“Namecheap BasicDNS” waa ikhtiyaarka caadiga ah waxaanad dooran kartaa “Custom DNS” oo ka soo jeeda muraayadda hoosta.
Hadda waxaad soo iibsatay magac domain ah, qorshe martigelineed ee webka iyo waxay sidoo kale soo cusbooneysiiyeen liiska. Markaa maxaa dhacaya ka dib? Asal ahaan, marka aad iibsato magac domain + qorshaha martigelinta web, waxaad u baahan tahay inaad sameyso waxyaabo 3 ah. First, samee xisaabtaada martigelinta ee shabakada (oo ay ku jiraan casriyadaha magacawga, cusbooneysiinta ereyada, iwm.). labaad, waxaad faylasha faylasha ka soo rogtaa kombiyuutarkaaga. saddexaad, samee xisaabaadka emailkaaga gaarka ah (you@your-domain.com).
Waxaan helay emailka akoontiga macluumaadka wax ka yar saacadaha 30. Hadda waxaan si fudud u socon doonaa Aagga Macmiilka Hawk – kaliya haddii.
Taasi waa “Email Macluumaad” email ka ah Hawk Host kaas oo ay ku jiraan faahfaahinta server (ama macluumaadka login ee koontada martigelinaysa). Waxaad u baahan doontaa this macluumaadka si toos ah ugu soo gali kartaa cPanel-kaaga. Iyo hey, waa kala duwan ka soo galitaanka Hawk Host (taas oo asal ahaan cinwaanka emailkaaga iyo furahaaga sirta ah aad waxay dejiyeen inta lagu guda jiro hawsha baaritaanka).
Marka xisaabtaada martigelinta la dhaqaajiyo, waxaad arki doontaa “Active” xaaladda koontadaada martigelinta.
Waxaad riixi kartaa magacaaga domain si aad u aragto macluumaadka martigelinta (sida magaca domain la xiriira, magaca server, cinwaanka IP, servero, iyo faahfaahinta biilka). Sidoo kale, waxaad riixi kartaa badhanka “cPanel” (hoos Hal guji Fur) si dhakhso ah u gal macaamiishaada (adiga oo aan soo galin magaca isticmaalaha iyo lambarka sirta ah).
cPanel waa dashboardkaaga si aad u maareyso dhinacyada kala duwan ee server-kaaga iyo sidaas oo ah boggagaaga (s). Tusaale ahaan, waxaad u baahan tahay inaad tagto cPanel si aad u abuurto subdomain sida premium.minterest.com, ama si aad u sameysatid akoonnada emaylka, ama aad u rakibto WordPress, ama aad u maamusho feylasha ku jira serverkaaga, ama aad u qaadatid websaydh habeyn ah, si aad u hubiso isticmaalka diskka iyo xawaaraha, si aad u maamusho keydka macluumaadka, iyo wixii la mid ah. Haddii ay dhacdo, halkan waa sawir buuxa oo ka mid ah “Hawk Host”.
Waxaad isticmaali kartaa Softaculous Apps Installer si aad u rakibto qoraallo kala duwan sida WordPress, Joomla, Drupal, phpBB, iwm. Hadda waxaad rabtaa inaad WordPress ku rakibto, sax? Sidaa daraadeed, riix “icon” icon ka soo Softaculous Apps Installer menu.
Riix “Hadda Hadda”.
Haddii aad rabto inaad WordPress ku rakibtid xididkaaga domainka (ie example.com or minterest.com), ka dibna waxaad u baahan tahay inaad ka baxdid “In Directory” (sida kor ku xusan). Iyo haddii aad rabto inaad ku rakibto WordPress on subfolder magacaabay blog (ie minterest.com/blog/) markaa waxaad u baahan tahay inaad gasho “blog” gudaha “In Directory”.
Ku qor cinwaanka emailka (way ka duwanaan kartaa emailkaaga admin) ee “faahfaahin ku rakibida emailka”.
Fiiro: Haddii aad hesho qalad sheegaysa “Ku rakibid ma socon karo sababtoo ah faylalka soo socda ee ku jira faylka bartilmaameedka” ka dibna si fudud u calaamadee sanduuqa ku yaala “Dooro sanduuqa koontada si aad u buuxiso dhammaan faylasha oo sii wad”.
Plugins Installed ayaa muujinaya liistada dhammaan khidadaha aad ku rakibtay oo xitaa waxay uqeybsantaa khidadaha ku jira Dhammaan, firfircoon, aan firfircooneyn, iyo Lifaaqa la heli karo (faallooyin aan udub-dhicin). Waxaad kicin kartaa ama furi kartaa plugin ku rakiban halkan. Haddii uu jiro nuqul cusub oo plugin ah oo aad hore u rakibtay, ka dibna wuxuu muujin doonaa “update hadda” link.
Riix “Add New” si aad u rakibtid fiilo cusub oo ka soo gashato tusmada WordPress ee rasmiga ah ama adigoo rikoodhka gacanta ku soo dhejinaya.
Isticmaal sanduuqa raadinta si aad u hesho plugin aad raadineyso. Ama, isticmaal badhanka “Upload Plugin” si aad gacanta ugu dhejiso oo aad rakibatid plugin ah oo aad soo dejisay ama iibsatay meelo kale.
Marka aad heshid plugin aad raadineyso, riix “Install Now”.
Marka fiilo cusub lagu rakibo si guul leh, waxaad arki doontaa badhanka “Activate”.
Riix badhanka “Activate”.
Markaad eegto mawduuca WordPress, waxaad u baahan tahay inaad aragto website-kaaga mustaqbalka. Taasina waa sababta aad u soo qaadato mawduuc / template waa qaybta ugu adag ee samaynta goobta WordPress. Dhab ahaan. Waxaa jira tiro badan oo lacag la’aan ah oo lacag la’aan ah oo WordPress ah oo lacag la’aan ah oo loo bixiyo si ay u doortaan mid ka mid ah mawduucyo badan oo noqon kara mid aad u adag.
Isla sidaas ayaa sameeya marka aad iibsato mawduuc WordPress ah oo lacag la’aan ah oo laga helo mawduuc madaxbannaan oo madax bannaan (ama xoriyeeyaha). Waxaad heli kartaa mawduuca aad jeclaan lahayd marka ugu horeysa, laakiin ugu dambeyntii, mawduucuna wuu sii yaraanayaa.
Taasi waxay tidhi, uma baahnid inaad tagto mawduuca StudioPress ama mawduuc kale oo WordPress ah mooyaane mooyaane miisaaniyad ma haysatid isla markaana aanad degdegin inaad dhisato blog-xirfadeed. Waxaad marwalba ka dhigi kartaa tallaabadan blogka ah oo fiican. Ku dhowaad dhammaan moobiiliyayaashu waxay ahaayeen marxalado cusub oo fursado ay ku bilaabeen mawduuc WordPress ah oo lacag la’aan ah (naftayda waxaa ku jira).
Waxaa jira boqolaal sheekooyin WordPress ah oo lacag la’aan ah in mawduuca rasmiga ah ee rasmiga ah ee WordPress, iyo in ka badan uun ku filan si loo bilaabo. Had iyo jeer waad kordhi kartaa mar dambe!
Taasi waa Dashboard WordPress aadna ka timid halkan aad maamuli lahayd boggaaga WordPress. Haddii aad rabto inaad ku rakibto mawduuca WordPress, ama rakibo fiilo, ama ku dar waxyaabo, ama ku dar user kale, ama bedelida meel – Dashboard waa meesha lagu joogayo.
Riix “Mawduuca Cusub” kadibna badhanka “Upload Upload” si aad u rogto mawduuca WordPress .zip faylasha aad ka soo iibsatay StudioPress.com.
Hadda ku dheji oo rakib “Digital Pro” (ama Mawduuca Ilmaha ee aad iibsatay).
Marka aad dhaqaajiso mawduuca Genesis, waxaad arki doontaa menu cusub oo ku yaal dhinaca bidixda bidix. Oo waxay muujinaysaa qaybaha Muhiimka ah ee Mawduuca, Goobaha SEO, iyo Soo Dejinta / Dhoofinta Dibedda. Xaalad kaliya, halkan waa a shaashadda shaashadda ‘Genesis Theme Settings’ oo dhan laakiin maaha inaad ku darto / wax bedesho ilaa aad ogtahay waxaad samaynayso.
Waa inaad gashaa plugin WordPress Soo-dejiyaha si loo soo koobo nuxurka demo. Tag Dashboardka WordPress> Qalabka> Soo Dejinta, riix “Hadda Hadda” (si loo soo rogo faylasha WordPress).
Marka aad si guul leh u rakibtay plugin WordPress ee soo dejinta, tag Dashboardka WordPress> Qalabka> Soo Dejinta oo guji “Run Run”. Waxay kuu ogolaaneysaa in aad soo dhejiso content dulucda theme (ama content aad gacanta u dhoofin ka site kale oo WordPress ah).
Marka laga hadlo, nuqulka dijitaalka ‘Digital Pro theme demo’ wuxuu ku yaalaa faylka “xml” ee faylka mawduuca cunugga ee aan la fasixin.
Dooro faylka digital-pro.xml (si aad u soo dejiso content + images) oo guji “Faylka faylka iyo soo dejinta”.
Waxaad ku qori kartaa qoraa cusub ama dooran kartaa qoraaga jira ee loogu talagalay content demo. Oo calaamadee sanduuqa ku xiga “Download and import attachments file”.
Markaad WordPress ku rakibto server-kaaga, waxaad heleysaa fursad aad ku qorto magaca isticmaalaha iyo furaha ereygaaga aadna aad hesho URL-yada oo u eg sida – http://www.example.com/wp-admin/.
Marka aad si guul leh ugu soo gali karto WordPress, waxa aad aragto marka hore waa Dashboardka WordPress (ama si fudud Dashboard). Waxay ku siineysaa aragti dhakhso leh oo ku saabsan waxa ku dhacaya bloggaaga – sida tirada guud ee qoraallada blogka iyo boggaga, faallooyinka, qoraallada dhowaan la daabacay, faallooyinka dhawaan, iwm.
Si kale haddii loo dhigo, Dashboard waa qaboojiyaha boggaaga WordPress oo waa meesha aad ka qaban karto wax kasta oo ku jira blogkaaga. Fursadaha kala duwan ayaa la heli karaa – si ay u daabacaan boostada cusub ee blogka, abuurto bog cusub, ogolaato faallooyin, goobo bedelaad ah, iwm.
“Screen Options” waxay sidoo kale xuduud u yihiin waxayna kuu ogolaaneysaa inaad qaabeysid shaashadda WordPress oo aad fiirineyso. Taasi waa, waxaad isticmaali kartaa Screen Options tab (ku yaalla dhinaca midigta sare ee shaashaddaada) si shakhsi ahaan shakhsiyadeed loogu sameeyo qaybta WordPress qaybta khaaska ah (sida Posts, Pages, Faallooyinka, iwm.).
Haddii ay jiraan fursado aanad isticmaalin, waad u diidi kartaa. Weliba waxaad mar walba soo celin kartaa haddii loo baahdo. Tusaale ahaan, Dashboard, waxaad ka saari kartaa waxyaabaha aanad isticmaalin, sida ‘Welcome’, ‘Events Event and News’, ama ‘Quick Draft’. Habkaas, shaashadda ayaa la samayn karaa si aad u eegto wax yar oo isbedbedelay oo ka sii badan waxa aad u baahan tahay inaad diirada saarto.
“Caawin” waa liis gaar ah oo laga heli karo boggaga oo dhan si aad u heshid caawimo shaashadda hadda.
“Updates” waxay kuu ogolaaneysaa inaad hubiso in aad ku rakibtay qaybta WordPress ee ugu dambeysay iyo sidoo kale waxay muujineysaa in Mawduucyada ama Plugins-kaaga ay yihiin kuwo aad u-cusboonaadey iyo haddii kale. Haddii ay jiraan wax cusbooneysiin ah oo loogu talagalay boggaaga WordPress, markaa waxaad arki doontaa ogeysiin ku jirta Toolbar (top) iyo sidoo kale Sidebar (bidix).
Kordhinta WordPress waa nidaam fudud oo hal mar ah. Dhammaan waxaad u baahan tahay inaad sameyso waa guji “Update Now” marka aad aragto version cusub oo WordPress ayaa si toos ah kuu samayn doonta. Iyo si aad u cusbooneysiiso mawduucyada iyo plugins, waxaad dooran kartaa dhammaan ekonaadyada ama mawduucyada aad rabto inaad cusboonaysiiso, ka dibna riix “Qalabka Cusub” ama “Mawduuca Cusbooneysiinta”.
“General Settings” waa shaashadda “default settings” oo waxay kuu ogolaaneysaa in aad udhigto / bedesho cinwaankaaga boggaaga, sharaxaadaha, URLsyada, email admin, aagaga waqtiga, iwm. Ha beddelin “Cinwaanka WordPress” (URL) “ama” Site Address (URL) “Haddii aadan garanayn isticmaalka iyo ujeeddo.
Waxaad daabici kartaa sheeko kasta oo ka mid ah WordPress Dashboard (adoo isticmaalaya Editor Editor) ama isticmaali kara qalabka 3rd-sida (Blogo, Writer Live, iwm) ama xitaa via email. “Qorista Qodobada” waxay kuu ogolaaneysaa inaad bedesho qaybta post post, qaab boostada, iyo qaybta isku xirka.
Waxaa sidoo kale jira qayb la yiraahdo “Update Services” halkaas oo aad ku dari karto adeegyo cusub oo cusub oo bogga ah si ay WordPress ugu wargaliso markaad daabacayso boostada cusub ee blog. Uma baahnid inaad wax ka qabato sida WordPress horayba u buuxisay adeeg cusub oo casriga ah oo lagu magacaabo Pingomatic (http://rpc.pinginth.com/).
“Akhriska Qodobka” wuxuu kuu ogolaanayaa in aad u habeysatid boggaaga boggaaga iyo RSS-ka. Taasi waa, waxaad soo bandhigi kartaa dhammaan boggaga ugu dambeeyay ee boggaga ama bogga caadiga ah (haddii aad aniga ila tahay, ama bogga archive, ama bogga khaaska ah) sida cirbaddaada.
Ugu dambeyntii, haddii aadan rabin matoorada raadinta si aad u muujisid blog-kaaga (ama tusi website-kaaga natiijooyinka raadinta) markaa waxaad fiirin kartaa “Ka hortaga mashiinnada raadinta ee laga soocayo boggan”.
“Qodobbada Fahamka” ayaa kuu ogolaanaya inaad bedesho fursado badan oo la xiriira nidaamka WordPress faallooyinka WordPress. Tusaale ahaan, waad iska faquuqi kartaa faallooyinka gebi ahaanba dhammaan qoraallada blogka adigoo ogaanaya “U oggolow dadka in ay ku dhajiyaan faallooyinka maqaalada cusub” ama xitaa dooran karaan inay si toos ah u soo dhaweeyaan faallooyinka blog posts ka weyn lambarka maalmaha.
Ugu dambeyntii, waxaa jira qayb kale oo la yiraahdo “Avatars”.
“Media Settings” wuxuu kuu ogolaanayaa inaad bedesho xajmiga sawirada ee aad ku dhajiso boostada blogka iyo badanaaba maahan inaad adigu beddesho goobahaas si ay si toos ah u dejiyaan mawduuca WordPress ee aad isticmaalayso.
Waxaad sidoo kale xakamayn kartaa sida faylashaada loo soo diray. WordPress default by abaabulaan aad uploads bil kasta iyo sanadka. Taasi waa, haddii aad faylasha geynayso August 2017, ka dibna WordPress wuxuu ku qori doonaa http://www.example.com/wp-content/uploads/2017/08 (iyadoo si toos ah loo abuurayo faylasha: “2017” iyo ” 08 “).
Haddii aanad dhicin “Abaabulaan farsamadeeyaheyga bilaha iyo sanadka-ku-saleysan” kadibna waxaa lagaa dhigi doonaa dhamaan walxahaaga la soo dhejin doono http://www.example.com/wp-content/uploads/ (hab aan habaysanayn).
“Permalink Settings” ayaa kuu ogolaanaya inaad bedesho qaabka cinwaanada rasmiga ah ee posts iyo bogagaaga. Nidaamka loo yaqaan default permalink ee WordPress waa dherer ama maahan sidaas user / search saaxiibtinimo. Xaqiiqda, WordPress lafteeda ayaa si rasmi ah ugu yeertay ogolaansho joogta ah sida “Dabacsan”. Iyo inta badan waa qaabka qaabka http://www.example.com/your/month/day/post-name/ ama http://www.example.com/?p=123.
“Isticmaalayaasha” liiska dhammaan isticmaalayaasha hadda jira ee boggaaga WordPress. Isticmaalayaasha WordPress waxay noqon karaan Maamulayaal, Tifaftireyaasha Qoraallada, Ka-qayb-galayaasha, ama Macaamiisha – iyadoo ku xidhan doorka iyo oggolaanshaha la xidhiidha mid kasta.
Si fudud u riix batoonka “Add Add New” si aad u abuurto user cusub oo aad u dejisan kartid doorka isticmaalkooda, sirta, iyo emailka marka aad sidaas samaynayso.
Sidaas awgeed, haddii isticmaalayaashu rabaan inay faahfaahiyaan xogta profile ka dibna waxay raaci karaan boggooda “Your Profile” ee ku yaal boggooda WordPress-ka waxayna bedeli karaan midabka mawduuca, sirta, bio, email, magaca muuqda, iwm.
Sidaas darteed haddii aad rabto inaad qariso waxaad markaa ka sameyn kartaa “Your Profile”. Si fudud u fiiri “Show Show Toolbar marka aad daawaneysid goobta” xulashada bogga “Your Profile”.
Intaa waxaa dheer, haddii aad tahay coder markaa waxaad dooni kartaa inaad joojiso tifaftire muuqaal ah waxaadna ka sameyn kartaa bogga “Your Profile”. Kaliya hubi “Damiinta tifaftiraha muuqaal markaad wax qoreyso” waxaadna arki doontaa aragtida qoraalka (ama muuqaalka HTML) ee posts iyo pages marka aad qoraysid ama mid saxayso.
Haddii aad dhab ahaantii ku saabsan tahay blogging markaas “Posts” ayaa noqon doona qaybta ugu-booqashada ee blog. Waa sax! “Posts” ayaa liis gareeya dhammaan fariimo qoraallada (daabacan, jadwalka, qorshaha gaarka ah, qoraallada gaarka ah) ee ku yaala blog-kaaga oo ku qoran amarka taariikhda ah ee dib-u-dhaca si ay ugu noqoto boostada ugu dambeysa marwalba. Waxa kale oo jira qashin la heli karo si aad dib ugu soo ceshan kartid posts blog ama si joogto ah u tirtirto.
Markaad soo gashid “Posts”, waxaad arki kartaa tusaale tijaabo ah oo la daabacay oo cinwaankeedu yahay “Hello world!”. Iyo haddii aad jebiso muruqaaga, wuxuu soo bandhigi doonaa ficilada dhaqsaha ah ee soo socda: Beddelidda, Kala-beddelka Quick, Qashinka, View. Delete “World of Hello!” Sababtoo ah waa tusaalayn sawir leh oo sawir la’aan ah.
Markaad rabto inaad sameysid boostada cusub ee blog, waxaad ku dhufan kartaa “Add Add New” hoosteeda “Posts” oo waxay kuu geyn doontaa WordPress WYSIWYG (“Waxaad Eegto Waa Maxaad Heshaa”).
Waxaad ku qori kartaa nuqul ka mid ah tifaftiraha WordPress sida aad adigu ku samayso Microsoft Word ama Apple Pages. Oo waxaad isticmaali kartaa badhanka “Add Media” si aad faylasha uga soo rogto kombiyuutarkaaga ama URL kale.
Waxaad bilaabi kartaa inaad ku qorto boostada adoo galaya cinwaanka mawduuca iyo mawduuca dhabta ah ee degaanka dib u habeynta. Marka laga soo tago, waxaad sidoo kale arki kartaa waxyaabo badan oo kale oo loo yaqaan ‘Publish, Format, Categories, Tags, sawir sawir, iwm.
Waxaad si sahlan u yareyn kartaa ama u ballaadhin kartaa widgetka adigoo gujinaya mawduuca mawduuca waxayna ku celin kartaa adigoo isticmaalaya jiidis iyo dhibco (marka laga reebo cinwaanka iyo boosteejada boostada). Sidoo kale, waxaad ku dari kartaa / ka saari kartaa widgets adiga oo isticmaalaya “Screen Options” ee bogga tifaftiraha WordPress.
Tusaale ahaan, haddii aad haysatid qorayaal badan oo ku jira blogkaaga markaa waxaad awood u siin kartaa “Qoraal” Qoraal si aad u bedeli karto qoraaga boostada blogka ee hadda socda.
Tifaftiraha WordPress wuxuu ku siinayaa mug badan oo ah qaabaynta qaabaynta iyo waxaad awood u siin kartaa fursadaha xitaa ka badan adigoo gujinaya “Toolbar Toggle” badhanka (badhanka ugu dambeeya ee ku jira qaabka xulashada qaabaynta).
Markaad dhameysid boosteejada boostada, waxaad dooran kartaa tags iyo qaybo si aad ula macaamilato boostada. Iyo haddii aadan rabin inaad daabacdo boostada blogka isla markiiba waxaad u kaydin kartaa sida qabyo ah oo xitaa u daabacan karaa boosteejo gaar ah adoo bedelaya goobaha “Daabacaadda” widget.
Posts ayaa sidoo kale la qorsheyn karaa in la daabaco wakhtiga mustaqbalka adigoo riixaya “Isticmaal” oo ku xiga “Daabacada isla markiiba” iyo xulashada taariikhda iyo waqtiga mustaqbalka. Markaad doorato taariikhda iyo wakhtiga mustaqbalka, badhanka “Daabacaad” ayaa isbedelaaya “Jadwalka” waxaadna riixi kartaa si aad u qabsatid boostada blogka.
Qeybaha waxay yeelan karaan heer sarre. Waxay ka dhigan tahay inaad abuuri karto qaybo iyo qaybo yaryar haddii aad rabto. Haddii aanad abuurin qaybo, dhammaan boggaga blog-ka ah ayaa si toos ah loogu dari doonaa qaybta caadiga ah ee loo yaqaan “Uncategorized”.
“Warbaahinta” ayaa kuu geyneysa Library Library. Waxay muujineysaa dhammaan faylasha warbaahinta – sawirrada, fiidiyowga, iwm. – in aad soo dejisay markii aad abuurayso boggag iyo bogag (boggaga ugu dambeeyay ayaa horay loo taxay). Waxaad riixi kartaa sheyda shakhsi ahaaneed si aad u aragto / u faahfaahiso faahfaahinteeda ama si aad u hesho xiriir toos ah
Adiga guud ahaan uma baahnid inaad heshid Maktabada Warbaahinta haddii aadan rabin inaad maamusho faylka horay loo soo rogay ama aad rabto inaad faylal kale u dirto gacanta. Riix “Add Add New” si aad gacanta u soo geliso faylashaada kombiyuutarkaaga. Sidoo kale, waad soo gudbin kartaa nooc kasta oo fayl ah (ma ahan kaliya sawirro ama dukumiintiyo).
Tusaale ahaan, markaad dib u cusboonaysiiso boostada hore ee blogka waxa ay ka muuqan doontaa boggaaga oo dhamaan macaamiisha blog-kaaga ayaa la ogeysiin doonaa (RSS iyo Email) – xitaa haddii aadan rabin. Laakiin marka aad cusboonaysiiso Bogga, macaamiisha blog-ka ma ogaan doonaan haddii aadan ku xirneyn sida boggaga aan ku muuqan barta RSS-ka.
Qaybaha comments ayaa kuu ogolaanaya inaad maamusho dhammaan faallooyinka aad ka heshay boggaaga WordPress. Waxay muujineysaa faallooyinka ku xusan amar goos goos ah. Markaad foorarsato foorishada faallooyinka, waxay muujineysaa falalka degdegga ah ee kuu oggolaanaya inaad oggolaato, ka jawaabtid, isbedelka, isbaarada, ama xitaa qashinka ku tuurto. Waxaad sidoo kale dhexdhexaadin kartaa faallooyin badan isla markaa adoo isticmaalaya “Waxqabadka Bulshada” ee kor ku xusan.
“Menus” ayaa ah astaanta caadada ah ee loo isticmaalo si loo abuuro xiriirinta bogagga iyo bogagga (haddii mawduucan uu taageerayo wax badan). Marka aad sameysid menu, waxaad ku dari kartaa boggaga, farriimaha, isku xirnaanta caadooyinka, qaybaha, tags, iwm. (Isticmaalaan Fursadaha Screen si ay u sameeyaan dhammaan fursadaha la arki karo) waxayna si sahlan u bedeli kartaa amarka kala-jaadnimada adoo isticmaalaya jiidista iyo tuurista. Waxaa lagu soo bandhigay meel horay loo cayimay iyadoo mawduucani ay tahay inaadan bedeli karin goobta. Laakiin waad baddali kartaa xiriirinta ama amarka kala soocidda “Edit Menu men” adoo adeegsanaya “Qaab-dhismeedka Maqalka”.
Waxaad fiirin kartaa “Meelaha Meelaha” si aad u ogaatid inta jeer ee mawduucyada lagu taageerayo mawduuca waxayna kuugu qori karaan cuntad goobta. Xulo “Header Menu” iyo “Footer Menu” oo guji “Keydka Isbedel”. Waxaad abuuri kartaa liiska badan ee aad rabto kadibna ku qor mawduuc meel ama waxaad ku wareejin kartaa hal raandi ah dhammaan goobaha.
“Widgets” ayaa badanaa loo yaqaannaa sidebar sababtoo ah markii hore waxaa loo adeegsadaa si loo xakameeyo dhiniciisa (iyadoo la socdo raadinta, maqaallada caanka ah, faallooyinka dhow, iwm) ee bogga WordPress. Maanta waxaa kale oo loo isticmaalaa in la abuuro loona xareeyo bogga ama bogagga gudaha (marka mawduuca la abuuro si loo habeeyo habkaas). Marka aad soo gashid Widgets, waxay muujineysaa liiska “Widgets Available”, “Widget Area” (ama widget-yada), iyo “Widget Widgets”.
Widgets Available ayaa muujinaya dhammaan qalabka shaqsiyadeed ee aad isticmaali karto boggaaga WordPress. Waxaad dib u isticmaali kartaa tiknoolajiyada isku mid ah marar badan inta aad rabto – waxaad bixineysaa mawduuca aad isticmaalayso taageerada. Qaybaha la heli karo iyo aagga widget waxay ku xiran tahay mawduuca hadda socda. Waxaad jiidi kartaa oo aad ka dhigi kartaa widget-kaaga mid ka mid ah widget meel kale. Iyo marka aad u habeysey widget waxaad gujin kartaa “Badbaadi” ama guji “Delete” si aad si joogto ah uga saarto widget aadan u baahnayn.
WordPress sidoo kale wuxuu leeyahay “Widget Widgets” aaguna waa sida qashin dib loo isticmaali karo. Waxaad jiidi kartaa oo aad ka dhigi kartaa widget-yadaaga qaybahaaga firfircoon ee firfircoonida illaa Wax-qabadka Wax-qabadka (Inactive Invitations) si aad dib-ugu-dib u isticmaali karto (iyada oo aan luminayn xogta). Waxaa si gaar ah faa’iido leh markaad rabto inaad bedesho mawduuca WordPress oo aad ku hayso goobaha aad ku jirtid.
… iyo sifooyin kale oo badan.
9.8.1. Yoast SEO Dashboard – Guud
Waxaad riixi kartaa “Furaha Wizard Qalabka” si aad u rakibto Yoast SEO plugin adigana ama waxaad raaci kartaa hagidkeyga oo sameeyn kartaa fursado kala duwan sida aan sameeyay (bedelida magaca bogga iyo tagline adiga). Waad bedeli kartaa goor dambe markaad wax badan ka barato.
9.8.2. Yagleelka SEO Dashboard – Features
9.8.3. Dashboard SEO – Warbixintaada
9.8.4. Dashboard SEO ah – Qalabka Webmaster
Tools Webmaster Google (ama hadda loo yaqaano “Search Console Search”) waxay bixisaa aragti ku saabsan aragtidaada internetka ee Google.
Riix ‘Google Search Console’ si aad u dalbato lahaanshahaaga magacaaga domain ee ku yaala raadinta ‘Console Search’. Oo wuxuu furi doonaa Central Webmaster Google.
9.8.6. Dashboard SEO-Yoast – Badbaadada
Guji “Kaydso isbeddel”.
9.8.7. Yoast SEO Titles & Metas – Guud
9.8.9. Yoast SEO Titles & Metas – Noocyada Boosta
9.8.12. Yoast SEO Titles & Metas – Kale
Tag WordPress Dashboard> Xiriir> Foomamka Xiriirka, waxaad arki doontaa foomka xiriirka ee default oo cinwaankiisu yahay “Foomka Xiriirka 1” ee si toos ah loo abuuray markii aad rakibtay Foomka Xiriirka 7 markii ugu horeysay. Waxaad awood u yeellan kartaa si aad u sameysid shuruudahaaga. Hoos ka dul qaado, riix “Edit”. Waxaad tagi doontaa “Tijaabada Foomka Foomka” shaashadaha sida Foomka, Boostada, Fariimaha, iyo Meelo Kale.
Isticmaal “Form” tab si aad u habayso macluumaadka ay tahay in laga ururiyo akhristayaashaada.
Isticmaal “Miiska” tabaha si aad u habayso sida habka loo isticmaalo macluumaadka la isticmaalo. Tusaalaha kor ku xusan, dhammaan foomamka uu soo gudbiyo user ayaa loo gudbin doonaa cinwaanka email kale.
Isticmaal “Messages” tab si loo habeeyo qirashada (user uu arko marka ay soo gudbiyaan foom).
“Customize” (Dashboardka WordPress> Muuqaalka> Habee) waxay kuu ogolaaneysaa inaad wax ka bedesho dhowr qaybood oo ka mid ah boggaaga WordPress ee waqtiga dhabta ah. Qaar ka mid ah waxyaabaha aad bedeli kartid waa Title Site, Tagline, Color, Header, Taariikhda, Raadinta Navigation, Widgets Sidebar, iwm.
Keen calaamaddaada oo ku dar “Title” iyo sidoo kale “Sub Text” (badanaa magaca boggaaga) sawirka.
Abuur sawirka haddii cabirkiisu uusan u dhigmin cabirka lagu taliyay iyo haddii ay la mid tahay cabirka lagu taliyay ka dib riix “Skip Cropping”. Markaad dhamayso, dhagsii “Badbaadi & Daabac”.
“Waxba kuma jiraan dunidaan waxay qaadan karaan meesha ay joogaan. Talent ma ahan: waxba kama badna ragga aan guuleysanayn ee hibo leh. Genius maaha; Maqsinnada aan la saarin waxay ku dhowdahay maahmaah. Waxbarashadu maaha: dunidu waxay ka buuxsantaa jahwareer aqoon leh. Kalsoonida iyo go’aaminta keligood ayaa ah mid ka baxsan. “- Calvin Coolidge
Tusaale ahaan, waxaad raadin kartaa Google “sida loo bilaabo blog-ka WordPress” waxaadna arki doontaa boqolaal macallimiin kale. Sidaa darteed aniga Waa hagaag, waxaan ku daray qiimo dheeraad ah adoo ku daray khibradeyda blogging. Noockayga ayaa laga yaabaa inuu ka fiicnaado kuwa kale ama laga yaabo. Laakiin waxaan sameeyay shaqadayda ugu fiican, taasina waa arrin muhiim ah.